Plex.Earth गुगल अर्थ बाट छवि डाउनलोड गर्दछ के यो अवैध छ? - Geofumadas
जनवरी, 2012 अटोक्याड-Autodesk, गुगल अर्थ / नक्सा
हामीले केही प्रोग्रामहरू अघि देख्यौं जुन गुगल अर्थबाट छविहरू डाउनलोड गर्दछन्। जियोरेफरेन्ड वा छैन, केहि अब अवस्थित रूपमा अवस्थित छ सिलाईमोडहरू y GoogleMaps डाउनलोडर.
अर्को दिन साथीले मलाई सोध्नुभयो भने यदि AutoCAD बाट Plex.Earthले गुगलको नीति उल्लङ्घन गर्दछ वा गर्दैन।
Google को सर्तहरू के हुन्
(सी) जारी, बेसेट वा समान अनुप्रयोगहरूको व्यवस्थापन। यसलाई प्रयोग गर्न अनुमति छैन कुनै तरिकामा सफ्टवेयर जसले प्रयोगकर्ता वा अन्य व्यक्तिलाई अक्षांश र देशान्तर संख्यात्मक समन्वयहरूको ठूलो डाउनलोड वा ठूलो फीडहरू पहुँच गर्न अनुमति दिन्छ। प्रयोगकर्ताले सफ्टवेयरको मुद्रणको लागि प्रयोग गर्दैन वा चित्रहरूको ठूलो डाउनलोड, डाटा वा अन्य सामग्री।
साथै Google नक्साको सर्तहरूमा यसले यसो भन्छ:
«तपाईं व्युत्पन्न प्रयोगहरूको लागि सामग्री निकाल्न सक्नुहुन्न जुन उत्पादनहरूसँग सम्बन्धित छैन, जस्तै अर्को ड्राफ्टि within भित्र अगाडि सम्पादनका लागि, डेस्कटप प्रकाशनवा GIS अनुप्रयोग। "
ESRI र गुगल अर्थ दुबै बिभिन्न फोरममा परामर्श गरिएको छ, तर हाम्रो सन्दर्भमा सबै भन्दा राम्रो सन्दर्भ स्रोत, किनकि PlexScape AutoDesk द्वारा एक अधिकृत विकासकर्ता हो, उही साइटमा भनेको के हो, मात्र जब कनेक्टर थियो प्रयोगशालामा। यद्यपि ब्लग AutoDesk को आधिकारिक राय होईन, यो माथि उपर्युक्त कथनहरु को एकलौठो बनाउने प्रयोगकर्ता लाई छोड्छ।
सोल्ट शेपपर्डले फिर्ता दिए तर आश्वासन दिए कि कानुनी भागले व्याख्या गर्नेछ, जुन कम्पनीले गुगल अर्थ API मा विकास कार्यान्वयन गर्न Google सँग एक सम्झौता गरेको छ जुन कुन कुरा समावेश गर्दछ कि Civil3D र AutoCAD नक्सा डिजिटल मोडेल आयात गर्दा के गर्छ र तस्बिरहरू
Autodesk सँग Google बाट एक इजाजतपत्र छ जसले Autodesk लाई Autodesk उत्पादनहरूको साथ Google अर्थ API लागू गर्न अनुमति दिन्छ; यद्यपि, हाम्रो कार्यान्वयनको विवरणहरू स्वत: तेस्रो पक्षको प्रविधिको प्रयोगका लागि ओडिओडको लाइसेन्स गोपनीय छन्, र हामी ग्राहकहरूलाई साथ जानकारी साझा गर्न स्वतन्त्र हुन सक्दैनौँ।
अन्तिम प्रयोगकर्ताहरू जसले Autodesk उत्पादनहरू (यसको आफ्नै अनुप्रयोगहरूमा खिच्दै समावेश गर्दछ) बाहिर Google Earth इमेजरी प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ निश्चित रूपमा Google बाट आफ्नै इजाजतपत्र प्राप्त गर्नुपर्छ र प्रयोगको लागि Google सर्तहरूको अनुपालन गर्नुपर्छ।
यो पनि स्पष्ट छ कि कुन समाप्ति प्रयोगकर्ताहरूले त्यहाँबाट उत्पादित उत्पादन गर्न चाहन्छन्, पहिले नै उनीहरूको आफ्नै जिम्मेवारी हो र उनीहरूका सर्तहरू पालन गर्न Google लाई सीधा लाइसेन्स चाहिन्छ।
त्यसैले, Plex.Scape AutoCAD को क्षमताहरु मा एक विकास हो, यो यस सम्झौता अन्तर्गत कभर छ। अवश्य पनि, Plex.Earth को फाइदा भनेको सिभिल3डी यसको लागी प्रयोग गर्दैन, तर केवल एक AutoCAD मात्र पनि LT हुन सक्छ। छवि पनि र colorsहरूमा आउँदछ र डाउनलोडको लागि रिजोलुसन छनौट गर्न एक विकल्प छ।
मैले मेरो पछिल्लो लेखमा उल्लेख गरें, यो को लागि सबै भन्दा उपयोगी उपकरण मध्ये एक हुनेछ हिस्पैनिक मध्यम प्रयोगकर्ताहरु। Plex.Earth सीधा साइट बाट खरीद गर्न सकिन्छ PlexScape वा एक AutoDesk डीलर को साथ। ल्याटिन अमेरिकाको मामलामा तिनीहरू स्थानीय वितरकहरूको खोजी गर्दैछन्।
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो सफ्टवेयर चोरी, कहिल्यै अन्त नहुने विषय
अर्को पोस्ट विश्वभरबाट नि: शुल्क नक्साहरूअर्को »
Rep को जवाफ "Plex.Earth Google Earth बाट छवि डाउनलोड गर्दछ। के यो अवैध छ?"
तिनीहरूले SAS.Planet परीक्षण गरे?
हो, यो कानूनी छ। ठिक छ, यो सम्झौता अन्तर्गत गरिएको छ जुन AutoDesk गुगलसँग छ।
त्यसो त यो कानूनी छ वा होइन?